တစ်ခါက ထင်းခုတ်သမား လူငယ်တစ်ဦး တောင်တက်ပြီး ထင်းခုတ်လေ သည်။ မကြာမီ ထင်းခုတ်သမား အဘိုးအိုတစ်ဦးလည်း ရောက်လာခဲ့သည်။ ထင်းများကို ခုတ်ကြရင်း ညနေစောင်းချိန်တွင် အဘိုးအို၏ ထင်းမှာ လူငယ်ထက် ပိုများနေခဲ့သည်။ အဘိုးအိုမှာ နောက်ကျမှ ရောက်လာပြီး သူ့ထက် ထင်းပိုများနေသည်ကို သတိပြုမိသောလူငယ်က နောက်ရက် တွင် စောစောထပြီး ထင်းခုတ်ထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် လူငယ်မှာ အဘိုးအိုထက် စောပြီး ထင်းခုတ်ရန် ထွက်ခဲ့သည်။ စိတ်ထဲတွင် အဘိုးအိုထက် ထင်းပိုရမည်ဟု တွေးနေမိသည်။ သို့သော် အလုပ် သိမ်းချိန်တွင် အဘိုးအို၏ ထင်းမှာ သူ့ထက် ပိုများနေ သည်ကို တွေ့ပြန်သည်။ သို့နှင့် လေး၊ ငါးရက်ဆက် တိုက် တောင်ပေါ် သို့ ရောက်နှင့်နေပြီ မိုးချုပ်နေ၀င်မှ အိမ်ပြန်ခဲ့ သော်လည်း သူ၏ထင်းမှာ အဘိုးအိုထက် နည်းနေခဲ့သည်။
ခြောက်ရက်မြှောက်နေ့တွင် သူသည် မအောင့်နိုင်သည့်အဆုံး အဘိုးအိုအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ” အဘိုး…. ကျွန်တော်က အဘိုးထက် အားသန်တယ်… အဘိုးထက် စောပြီး တောင်ပေါ်ရောက်အောင် လာခဲ့တယ်.. နောက်ကျမှ အိမ်ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခုတ်ရတဲ့ ထင်းက အဘိုးထက် နည်းနေခဲ့တယ်… ဘာကြောင့်လဲ”
“ဒီိလို လူလေး… အ ဘိုးက ထင်းခုတ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း အဘိုးရဲ့ ပုဆိန်ကို သွေးတယ်။ လူလေးက မသွေးခဲ့ဘူး။ အဘိုး အသက်ကြီးပြီ နောက်ကျမှ တောင်ပေါ် ရောက်သလို လူလေးထက် စောပြီး အလုပ်သိမ်း ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးရဲ့ ပုဆိန်က လူလေးပုဆိန်ထက် ထက်တယ်။ အဘိုး လေး ငါးချက်ခုတ်လို့ ပြတ်တဲ့ သစ်ပင်ကို လူလေးက ဆယ်ချက်လောက်ခုတ်ရတယ်… ဒါကြောင့် လူလေးရဲ့ ထင်းတွေ နည်းနေတာပါ”
အလုပ်ထဲက လူတွေကို ဟောပြောပွဲ သွားနားထောင်ဖို့၊ အချိန်ပို သင်တန်းတွေ တက်ဖို့ ကျွန်တော် အမြဲ တိုက်တွန်းတတ်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေက “အလုပ်ပင်ပန်းရတဲ့ ကြားထဲ သင်တန်းတွေ ဟောပြောပွဲတွေ တက်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး” လို့ ညည်းကြရင်း ဒီပုံပြင်နဲ့ ခိုင်းနိုင်းပြီး သူတို့ကို ကျွန်တော် ပြောတတ်တယ်။ “ထင်းပဲခုတ်နေပြီး ပုဆိန်သွေးဖို့ မေ့နေကြရင် အလုပ်အပြည့် လုပ်ပြီး ရလဒ်တစ်ဝက်ပဲ ခံစားရမယ် ဆိုတာကို တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် သိလာလိမ့်မယ်”
လူ့ဘ၀ လမ်းတစ်လျောက်မှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းဖို့ ကြိုးစားနေသလို တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်ကို ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပေါများနေသင့်တယ်။ အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ ထင်းခုတ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းလို့ ရပေမယ့် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီခေတ်မှာ ထင်းပဲခုတ်နေလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ တစ်ဖက်က ထင်းခုတ်ရင်း တစ်ဖက်ကလဲ ပုဆိန်ကို သွေးနေသင့်တယ်။ နို့မဟုတ်ရင် ခေတ်က ကိုယ့်ကို ပယ်ထုတ် သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာလေး ကို ဟိုး အရင်နှစ်က တည်း ဖော်ဝါ့မေးမှာ ဖတ်ဖူး တားတဲ့ စာလေး ကို ပြန်လည် ရှာဖွေ ပြီး တော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… စာဖတ်သူ အပေါင်းလည်း.. ထင်းပဲ ခုတ်နေပြီး.. ပုဆိန်မသွေးပဲ ခုတ်နေမှာ ဆိုးတဲ့ အတွက်… ထင်းလည်း ခုတ် ပုဆိန်လည်း သွေး… လုပ်ရင်း.. အချိန်တို အတွင်း မှာ ထင်းများများ ရနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…….
Credit to ဇော်သိင်္ခ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/03/2013 09:24:00 pm
HTC ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာ Font ရယူရန်
HTC ဖုန်းများ Root မလုပ်ပဲ Zaw Gyi Font သွင်းနည်းကျွန်တော် ဒီနည်းနဲ. HTC Sensation XE, HTC Desire HD နဲ. HTC ONE X မှာ စမ်းလုပ်ခဲ့တယ်...
MEIZU M2 Note Root & Myanmar Font ထည့်နည်း
ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်ခေတ်စားလာတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားလေးပါ... ပေးရတယ့်ငွေကြေးထက်စာရင် သူ့မှာပါတဲ့ spec တွေက တော်တော်လန်းပါတယ်။ ကဲဒါ...
ACDSee Pro 6.2 Build 212 (x86/x64) + keygen
အသုံးဝင်တဲ့ samsung ရဲ့ လျိုဝှက်ကုဒ်များ
Virus အမျိုးမျိုးသတ်နည်းစာအုပ် (မြန်မာ Ebook)2013 ...
ဓါတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံ သီချင်းလေးနဲ့ Slideshow လုပ်ခ...
Viber For Pc 1.2MB
ကွန်ဖူးအဖိုးအို apk For Android Game
Root မလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းနှင့် HuaweiG510,U8813 တို့အ...
Beini Software ဖြင့် Wifi ဟက်နည်း
ဓါတ်ပုံမှာ Effects ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေထည့်ပြီးအလှဆင...
အပြာရောင် Frozen Keyboard For Android
Photodex ProShow Producer 5.0.3310 + crack keygen
7-Data Partition Recovery 1.1
လာပါပြီ (VZO Chat) For Android apk
Samsung တော်တော်များများမှာ Myanmar Font ကို Root ...
Ultracopier 1.0.1.8 For Pc (5.9 MB
Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက် Zawgyi-One Font အသုံ...
ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်သော မျောက်ဝံ Kanzi
တစ်နာရီ ၂၈ မိုင်နှုန်းပြေးတဲ့ လျှပ်စစ်စက်ဘီး
ဖုန်းထဲကနေ မြန်မာဖုန်းဆော့ဝဲလေးတွေရော ၊ နိုင်ငံခြာ...
Android ဖုန်းမှာ ဈေးဝယ်စာရင်းလေးမှတ်ပြီး ဈေးဝယ်ထ...